Marka la raadinayo diiwaangelinta guud ee guud ee labada shakhsiyaadka khaldan ee LY TOET iyo XA XE - The Holy Land ee Daraasaadka Vietnam
1920 Views Prof. Assoc. HUNG NGUYEN MANH
Kuxigeenka Professor, Dhakhtarka Taariikhda Gaajada NGUYEN MANH
Magaca Nick: Faras shandad ku yaal tuulada jaamacadda
Magaca qalinka: Beetle
Xa Xe : Haddii qof walbaa si indho adag u ilaaliyo chignonkiisa sidaada oo kale, nacalaa! Dhamaan timajarayaasha ayaa dhiman lahaa.
Ly Toet: Haddii qof kastaa leeyahay timo sidaada oo kale ah, markaa, xitaa haddii uusan u adkeynin, dhammaan xamaarradu dhammaantood way wada gaajoon doonaan.
(Maantamajaladda majaladda No. 54 - Naa MayaXarafka xiisaha leh ee 'Ngày Nay] - Axad Abriil 11, 1937 - P.209)
Ly Toet [Lý Ma Qaban] iyo Xa Xe [Xã Xệ] waa lammaane isqaran kara oo shakhsiyadeed. Waxay leeyihiin xuruuf isku mid ah laakiin waxay leeyihiin qaabab kala duwan: Xa Xe [Xã Xệ] waa flabby (arag sawir), dheriga dhagxaanta leh, garka gadhka gadhka leh, iyo madaxa sidii xiirashada oo kale sida qumbaha, oo leh timo khafiifa oo gaar ah oo dusha ka saaran.
Sida Ly Toet [Lý Ma Qaban], wuu u eg yahay sidii diir oo kale oo dhuuban sidii kalluun qalalan oo kalluun leh, oo leh gadhigiisa tufaaxa yar iyo guluubka toonkiisa sida chignon. Markasta oo uu tago, Ly Toet [Lý Ma Qaban] had iyo jeer wuxuu xidhaa dhar qaran oo waligiis wuu ku guul darreystay inuu keeno dalladdiisa.
caption: Ly Toet Ly Toet [Lý Ma Qaban] markasta wuxuu xidhaa dhar qaran
oo waligiisna kuma guul darraysto inuu dalladdiisa la yimaado
caption : Xa Xe [Xã Xệ] tirada ayaa laga soo qaatay Phong Hoa [Phong Ho] (Dhaqanka iyo Kastamka) magazine
- tirsiga lambarkiisu yahay 95 ee taariikhdu ahayd Abriil 27, 1934 - Bogga 1.
Xa Xe [Xã Xệ] (weydiinaya iibiyaha): Ma haysaa hal ilko shanlo oo iib ah? Waxaan haystaa hal timo oo keliya. (Waxaa laga soo qaatay majaladda Maanta - cadadka No.59 ee la daabacay May 16, 1937 - bogga 331).
Akhristayaasha Akhriska Phong Hoa [Phong Ho] (Dhaqanka iyo Kastamka) joornaal todobaadle ah oo wakhtigaas had iyo jeer la kulma 2 shaqsiyadood, oo ahaa kuwo si cad oo geesinimo leh u qalma, oo taasi waxay u muuqatay si joogto ah sida laba walaalo oo uterine ah, oo ku dhashay waqooyiga. The Phong Hoa [Phong Ho] joornaalka toddobaadlaha ah wuxuu ahaa joornaal qosol badan, oo ay daabaceen The Tu Luc Van Doan [Tự Lực Văn Đoàn] (Kooxda Is-qorista Suugaanta). Goor dambe, markay ahayd majaladda toddobaadlaha ah Phong Hoa [Phong Ho] noqday Naa Maya [Haa Maya] (Joornaalka maanta), labada ayaa sheegay in shaqsiyada wali door weyn ka ciyaareen joornaalka caanka ah ee caanka ah. Sababtaas awgood, iyo marka loo eego jiritaanka labadan shaqsi ee waaweyn, akhristayaasha iyo xitaa Tu Luc Van Doan [Tự Lực Văn Đoàn] khalad bay sameeyeen markii la tixraacayo labada fanaaniin ee iyagu dhashay.
Sidaas awgeed, maxaan ka ogaannaa shahaadada manhajka ee labadan shaqsi? Raadinta asalkooda waxay u muuqataa inay tahay wax aad u xiiso badan.
Qiyaastii 70 sano ka hor, Phong Hoa [Phong Ho] joornaal toddobaadle ah ayaa abaabulay tartan loogu talagalay sawirista sawirro majaajillo ah. Waqtigaas, qoraa Laakiin Son - qalin magaca Le Minh Duc [Lê Minh Đức] - Marwo. Ay Lan's [Lani Lan] walaalkiis iyo tifatiraha guud ee joornaalka todobaadlaha caan ka ah Koonfurta, oo ahaa nin karti badan oo karti-yaqaan ah, wuxuu u diray waqooyiga Waqooyiga si uu uga qeyb qaato tartankaas (*). Sawirkani wuxuu muujinayaa Ly Toet [Lý Ma Qaban] iyo Xa Xe [Xã Xệ] adoo dul taagan buundo miisaan leh oo hoosteedana, ayaa qofku helayaa oraahda soo socota:
"Xa Xe [Xã Xệ]: Hagaag Bac Ly (Mr. Ly): Haddii aan miisaanno markaa labo u qeybi lahayn, wax dhib ah oo dhan ma jiri doono!"
(*) Marka loo eego TU KENH - Miyaan hagaajineynaa aqoonsiyada Ly Toet [Lý Toét] iyo Xa Xe [Xã Xệ] - Binh Minh [Bình Minh] (Down) - Saigon Mau Than [Sài Gòn Mậu Thân] Gugii 1968 - p. 12.
Farqiga weyn ee cadaanka ah ee u dhexeeya culeysyada labadan shaqsi ee jirdhiska ayaa ka kooban majaajillo iyo qosol aan caadi aheyn dabiiciga waqtigaas. Sidee culeyska guud loogu qeybin karaa labo? Sawirka kore ee kor ku xusan wuxuu ku guuleystay abaalmarintii ugu horeysay waxaana lagu daabacay bogga hore ee Phong Hoa (Waxaan iska indho tiraynaa tirada arintaas). Waqtigaas wixii ka dambeeyay, masiirka labadan shaqsi ee is khilaafsan ayaa aad isugu xirnaa midba midka kale - Wuxuu lamid yahay filimka majaajillada ah “Dufan iyo Haraad”Waxaa laga keenay Faransiiska wadankeena 30-yadii ama 40-meeyadii. Iyo, sidoo kale wakhtigaas wixii ka dambeeyay, labada shaqsi Ly [ly] iyo Xa [Xã] waxaa ka faa'iidaystay Tu Luc Van Doan [Tự Lực Văn Đoàn] kooxda suugaanta, iyo ilmaha "Xa Xe"[Xã Xệ] markuu dhashey ayaa la siiyay magaca waalid korsigiisa halkii magaca aabihiis la odhan lahaa.
Astaamo gaar ah, tiro akhristayaal ah, oo leh qaar ka mid ah sawirada rinjiyeynta, ayaa sidoo kale ceyrisay labadaas shaqsi ee awooda leh, taasoo keentay in dadka Reer Ilaalinta ee Faransiiska ay u tixgeliyaan inay yihiin wakiilo maxaabiista Vietnamese.
Kaftanka tiradaas oo ah “ranjiyeyaasha hiwaayadda”Waxaa udub dhexaad u ahaa astaamihii asalka ahaa ee shakhsiyaadka kor ku xusan - tusaale ahaan madaxa ayey ka jiiteen Xa Xe [Xã Xệ] Oo wuxuu ka dhigay inay la ekaato bariga doofaarka. Oo waxay ahayd wax la yaab badan markii timaha gaarka ah on Xa Xe's [Xã Xệ] madaxa wuxuu u eg yahay sida dabada doofaarka.
Mar dambe, amaahda muuqaalka xiisaha leh, the Song [Sng] (Live) warqad cusub oo hore Saigon [Saan Gòn] mar ayaa si fagaare ah la barbar dhigay wariye Ku Van's [Tô Vân] madaxa dabada ee xiddigta filimka quruxda badan Tham Thuy Hang [Thẩm Thuý Hằng]. Habkan isbarbar dhiga ee isbarbar dhiga waxaa adeegsaday gabayaaga Tran Te Xuong [Trến Tế Xương]:
“Tren ghe ba dam waa sidaas
Duoi san ong Cu wax la yaab leh"
(Kursigeeda, marwada Faransiiska waxay kor u qaadday dameerkeeda.
Gudaha barxada, liisanka shatiisa wuxuu ku duudduubay masduulaagii masduulaagii).
- Miyaad aragtay doofaar socda ilaa saaka?
- Maya, hadda uun baan ku arkaa!
(Majaladda Maanta - tirsiga No. 58 - Man iyo Affair - Axad Meey 9, 1937 - bogga 305)
Rinjiye Laakiin Wiil [Bút Sơn] qaaday Xa Xe [Xã Xệ] Hanoi si loo wada yaqaan Ly Toet [Lý Ma Qaban], marka marka dib loogu yeedhay Koonfurta, Xa Xe [Xã Xệ] qaaday Ly Toet [Lý Ma Qaban] weheliya. Sababtaas awgeed, Ly Toet [Lý Ma Qaban] iyo Xa Xe [Xã Xệ] ayaa ka soo muuqday Trao Phung [Trào Phúng] (Xun) joornaal iyo Cuoi Xuan [Cười Xuân] (Qosol Qosol) joornaal, sida la tusay iyagoo ku fadhiya sariirta oo wada cabbaya. Ly Toet [Lý Ma Qaban] cabitaan ku shubay Xa Xe [Xã Xệ] oo akhriyay Tan Da'sTản Đà] gabayo:
Bisad chen quynh rieng hoi ban tri am"
(Noloshu ma u nacay ama ma sidaa u nacay
Kordhinta koobka khamriga macaan waxaan weydiinayaa kaliya saaxiibkey saaxiibkey arintaas).
Xa Xe [Xã Xệ]: Sidan oo kale, waxaan gudanaynaa waajibaadkeenna
Ly Toet [Lý Ma Qaban]: Hadana waxaan amar ku siin karnaa dhalinyaradayada.
(Waxaa laga soo qaatay majaladda Maanta - tirsiga No. 60 ee la daabacay Maajo 23, 1937 - bogga 351).
Koobkii khamrigu wuu sara kacay, oo isagoo aan ogayn ayuu iska ilmeeyey Xa Xe's [Xã Xệ] madaxa.
Caqli xumadu waxay sii waday la socoshada labada shaqsi ee tagi jiray magaalada hoose, oo sababay Ly Toet [Lý Ma Qaban] inuu khalad sameeyo, markii uu arkay jaakad la tuuray oo ay la socdaan qaar ka mid ah qoob-ka-soo-baxa oo ka soo daadanaya qashinka qashinka, wuxuu ku qaldamay boqoshaada wuxuuna doonayey inuu geeyo guriga si ay ugaga adeegaan.
Maaddaama ay tahay muuqaal gaar ah, waxaa jira muuqaal muuqaal xumo ah oo majaajillo ah, oo muujinaya goob ay taas ka jirto Ly Toet [Lý Ma Qaban] waxay qaadataa dhalo si ay khamri ugu soo iibsato. Jidkiisa, wuxuu si lama filaan ah u dareemay inuu dawarsanayo oo wuxuu raadinayay meel ku habboon markii uu arkay inuu wajahayo calaamad "aan dhib lahayn". Ka dib wuxuu furay furka wuxuuna ku calaacalaa dhalada dhexdeeda intuu laftiisa la hadlayaa: "Sidee bay ii diidi karaan: Si khalad ah uma liqi karo meel walba".
Fikradaha iyo fikradaha kor lagu soo sheegay waxay iska leeyihiin qoraa Tu kenh [Tuu Kềnh], laakiin marka loo eego la tashiga dadka kale qaarkood, qaabka ayaa aad u kala duwan, sida dadka la tashanaya ay rumeysan yihiin taas Ly Toet [Lý Ma Qaban] iyo Xa Xe [Xã Xệ] waxaa sameeyay farshaxan-yaqaankii dambe ee caanka ahaa Nguyen Gia Tri (?)Nguyễn Gia Trí] oo sawirradiisa ku saxeexay farriimaha sida Rigt ama GTri (magiciisa Gia Tri [Gia Trí]).
Muujiyeyaasha ayaa ka mid ah Phong Hoa [Phong Ho] Magazine, ka sokow rinjiye Nguyen Gia Tri [Nguyễn Gia Trí], sidoo kale waxaa jiray rinjiyeye Ku socota Ngoc Van [Tô Ngɔc Vân] oo saxeexay magacyadiisa qalin Ayaan My [Myi My] iyo Ku Tu [Tô Tử], iyo sawirle kale oo saxeexay Wiil Dong [Ngông Sơn] - qalin magaca qoraa Nhat Linh [Nuux Linh]. Markaa, nooca noocee ayaa ah midka ugu saxsan, waxaana waajib nagu ah inaan sugno fikradaha wariyayaasha iyo ragga suugaanta ee iyagu isku quseeya labada shaqsi ee qosolka leh.
Awood u lahaanshaheenna oo ah - in aan ku kaftamino sirta aan qarsoonayn ee nafteennu ku sugan tahay xaalad waddankeenu is beddeleyso - xaqiiqaddani ma waxay muujineysaa awood, sida hub qarsoon oo is-difaac ah oo aan haysanno iyadoo ay jirto inaan la kulano nasiibdarro, taasi waxay noo ogolaan doontaa inaan waligeen laqalin. Iyada oo mar kale la raadinayo fahamka wanaagsan ee labada shaqsi Ly Toet [Lý Ma Qaban] iyo Xa Xe [Xã Xệ], ujeedkeenu maaha inaan aflagaadeynno dadkaan cad iyo kuwa fudud, laakiin waxaan dhab ahaantii higsanaynaa inaan u ekaano masaafurinta iyo luqadda iyo codadka bourgeois ee caajiska ah ee aan rajeyneyno inaan ku barano ku-dhaqanka si naxariis leh.
Ly Toet [Lý Ma Qaban]: - Xaq miyaa taas oo aad ahayd inaad barato dabaasha, dhaqso baad u baran doontaa?
Xa Xe [Xã Xệ]: - Waayo?
Ly Toet [Lý Ma Qaban]: - Sababtoo ah waxaad leedahay buufin-sida caloosha oo kale!
(Sida laga soo xigtay wargayska Today Magazine oo soo baxay 1936-1937- Cadadkii 75aad - Bogga 718).
Nooca Fiyatnaamiis: Tìi xukun “GIA PHẢ” của hai nhân vật ảo LÝ TOÉT và XÃ XỆ
(Booqday jeer 964, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,726
← FARSAMADA DADKA ANNAMESE - Qaybta 3: Waa kuma HENRI OGER (1885 - 1936)?
BARNAAMIJYADA Lý Toét, Xã Xệ →
Comments Off ku saabsan VIETNAMESE LUNAR SANADKA CUSUB Bandhigga ka socda asalka VIETNAMESE SOCIETY dhamaadka 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad
Booqashada Maanta: 160
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,081
Guud ahaan Wadarta: 285,976